Free internet- စာမျက်နှာ4- MYSTERY ZILLION
အင်ဖေါ်မေးရှင်း ဖြန့်ေ၀တဲ့အတွက် ကျေးဖူးပါ ရိန်းဂျားရေ အဲ ဒိန်းဂျားရေ။ (ကျား/မ မခွဲတတ်လို့။ စိုင်းဆိုပေမဲ့ တစ်ချို့က မစိုင်းတွေဖြစ်နေတတ်လို့ ကို-မ တတ်မခေါ်တာနော်)
ကျနော် PC speedup Tools ဆိုတဲ့ Thread အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဗားရှင်း 2.32 ပါ။
ကျနော်လည်း feedback တွေစောင့်နေလို့ကြာသွားတာတောင်းပန်ဘာတယ်။
1st feedback ပါ
ကျွန်တော်က MZ က member တစ်ယောက်ပါ။ Log in name က xxxxxxxxxx ပါ။ ပို့စ်တွေမရေးတတ်ပေမယ့် သူများရေးတဲ့ပို့စ်တွေဖတ်လေ့ရှိ ပါတယ်။ အခု အကိုတင်ထားတဲ့ Free Internet ဆိုတာလေးကို စိတ်၀င်စားလို့ပါ။ ကျွန်တော်က computer နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ profession ထဲကမဟုတ်တော့ သဘောပေါက်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အကိုပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေ၀ယ်ပြီးရင် သုံးလို့ရပြီလားမသိဘူး။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ laptop နဲ့ wi-fi connection
တစ်ခုမိတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ သူပြောတာကတော့ outdoor unit က
သူ့အိမ်နားမှာရှိလို့ရတာလို့ပြောပါတယ်။ အခုအကိုပြောတဲ့နည်းကကော outdoor
unit တစ်ခုခုလိုမလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အိမ်အနားမှာက wireless connection
တပ်ထားတာမရှိလောက်ဘူးထင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မယ်။ နောက်ပိုင်း
အကိုရှင်းပြထားတဲ့ထဲက software ပိုင်း (connection ဖမ်းပုံ) လေးတွေတော့
outdoor unit တပ်ဆင်ဖို့မလိုပါဘူး။ wireless wifi-adapter (USB / G Type)
(၁) ကိုယ့်အနီးနား ၀န်ကျင် (100 မီတာလောက်)မှာ WIFI Area ရှိလားလေ့လာပါ။
(WIFI ပါတဲ့ LAPTOP နဲ့ စစ်ဆေးကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်)
(၂) ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Extension Cable အရှည်ကြီး မလိုတော့ဘူးပေါ့
(၃) မရှိရင်တော့ ပုံမှာကျနော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ။ အခန့်မသင့်ရင်
Found New Hardware လို့တက်ပါလိမ့်မယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Found New
Hardware ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း ထပ်ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော် wifi adapter (USB) ကို MRS မှာ စျေးမေးကြည့်တော့ ၄ သောင်းကျော်လို့ပြောပါတယ်။ G Type ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖုန်းဆက်မေးတာဆိုတော့ ပစ္စည်းတော့မမြင်ရသေးဘူးပေါ့။ အဲဒီပေါ်မှာတော့
ရေးထားမယ်ထင်ပါတယ်။ အကိုပြောတဲ့ wifi adapter က အဲဒီစျေးလောက်ရှိလားမသိဘူး။ စျေးနည်းနည်းကြီးတော့ မှား၀ယ်မိမှာစိုးလို့သေချာအောင် လှမ်းမေးတာပါ။ ခဏခဏလှမ်းမေးရတာ
အားနာပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ပိုက်ဆံသိပ်မသုံးနိုင်တော့ ဒီတစ်ခုမှား၀ယ်မိရင် နောက်တစ်ခုထပ်မ၀ယ်နိုင်မှာစိုးလို့ပါ။
ကျနော်၀ယ်နေကျ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကိုညွှန်းလိုက်မယ်နော်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်က Matrix ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
Linksys brand 108 Meter g type (USB case) တစ်ခု သုံးသောင်း ခွဲ၀န်းကျင်ပါ။
သူ့ထက်သက်သာတာရှိပါသေးတယ် 25000 ၀န်းကျင်ပါ။ brand ကတော့မေ့သွားပြီ။
မေးသာမေးပါ။ အားမနာပါနဲ့။ ချက်ခြင်းမဖြေနိူင်သေးခဲ့ရင်
(၁) email မဖွင့်ဖြစ်သေးလို့
(၂) Testing လုပ်ကြည့်နေသေးလို့
အဲဒါတွေကြောင့် ကြန့်ကြာနိုင်တာမို့ သည်းခံပေးပါ။
ကျနော်အနေနဲ့ မေးလာသမျှကို ပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စာတွေ့
လက်တွေ့တွေ ပြန်လည်လုပ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ မေးရတာကို အားမနာပါနဲ့။ ကျနော်
မတွေ့နိုင်တဲ့ error တွေရှိလာခဲ့ရင် ကျနော်လည်း ပညာတိုးပါတယ်။
3 rd Feedback
ကျွန်တော် wifi-adapter တော့ ၀ယ်ပြီးပါပြီ။ အကိုပြောတဲ့ဆိုင်ကနေ အကိုပြောတဲ့ brand ကိုပဲ သုံးသောင်းခွဲနဲ့၀ယ်လိုက်တယ်။ adapter မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ software နဲ့ network ရှာကြည့်တယ်။ အခု အိမ်ထဲမှာ ဒီအတိုင်းရှာတာတော့ မတွေ့ဘူးဗျ။ အကိုပြောသလို လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ သိချင်တာလေးတွေရှိသေးလို့။
(၁) ကျွန်တော့်အိမ်ပေါ်မှာ (၈)ပေ စလောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီကောင်ရဲ့အလယ်မှာ
adapterထားပြီးဆင်ရင်ကောရမလားဗျ။ ဒါမှမဟုတ် ဇကာသတ်သတ်နဲ့ဆင်ရမလား။
(၂) အကိုပြောတဲ့ PVC ပိုက်တို့၊ thermofit တို့က ဘယ်မှာ၀ယ်ရလဲမသိဘူး။ အဲဒါတွေမရှိရင်ကော ကြိုးဆက်ရာတွေမှာ ရေမ၀င်အောင်ကာပြီးသုံးရင် အဆင်ပြေမလားခင်ဗျ။
(၃) Hardware ပိုင်းပြီးသွားရင် network ရှာတဲ့အခါ စလောင်းချိန်သလို ုိလှည့်ဒီလှည့်လုပ်ပြီးရှာရမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နေရာတည်းမှာ အသေချိန်ထားလို့ရလားခင်ဗျ။
ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၀ယ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။ အကယ်၍မရရင် အကို့ကို ထပ်ပြောမယ်နော်။
စလောင်းက ကြိုက်တာရွေးပါ။ အဓိက ကတော့ reflection ဖြစ်ဖို့ပါ။
ရေမ၀င်အောင် ရယ်။ frequency အပြင်မထွက်အောင်ရယ်က အဓိကပါ။
ကိုမိုးကြီးယူဆသလို လှည့်ရှာယုံပါဘဲ။ နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှည်ပါ။
အကိုရေ... ကျွန်တော် အကိုပြောတဲ့အတိုင်း ပစ္စည်းတွေ အကုန်ဆင်ပြီးသွားပြီခင်ဗျ။
အခု တပ်လိုက်တော့ Found New Hardware လို့ပဲပေါ်နေတယ်။ အဲဒါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
ပြီးတော့ ဒီ adapter နဲ့ ဘယ်လောက်အကွာအေ၀းအထိလှမ်းဆွဲလို့ရလဲ သိချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း လုပ်ချင်လို့တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အိမ်နားမှာ wireless တပ်ထားတဲ့သူ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါလေးရမရသိချင်လို့ပါ။
Adapter က USB ကို တိုက်ရိုက်ထိုးရင် Hardware သိတယ်ဗျ။ Network cable ခံလိုက်မှ Unknown device ဖြစ်သွားတယ်။
reply ပြန်တာနောက်ကျလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ Found New Hardware Case
ကိုပြောရရင် USB ဖွဲှုစည်းပုံကဘဲ စကြတာပေါ့နော။
USB မှာ Pin4ခုပါတယ်။
pin 1 =0V (GND)
pin2= Data +
pin3= Data -
pin4= + 5V
အဲမှာ pin 1 နဲ့ pin4က USB ကို on တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ pin2နဲ့
pin3ကတော့ Data input/output ကိုလုပ်ပါတယ်။ ကျနော်ထင်တယ် USB အတွက် Amp
က 0.5 လောက်ပဲရှိမယ်။
Motherboard ကနေ ထွက်တဲ့ Amp က နည်းတဲ့အတွက် cable length ကို limited ထားတာပါ။
Cable Length က over limited ဖြစ်သွားရင် voltage ကတော့ပြည့်ပေမဲ့ Amp
မပြည့်တော့ on/off မရတော့ဘူးပေါ့။
သတ်မှတ် Limit ထက်ကျော်သုံးချင်ရင်တော့က on/off အတွက် power လိုပြီပေါ့။
ဒီအထိရှင်းလားမသိဘူး။ ကျနော်က စာရိုက်နှေးတော့ ကြာတယ်။ ကဲဆက်ပါ့မယ်။
လုပ်ပုံရဖို့ထက် Theory က ပိုအရေးကြီးတယ်ထင်လို့ရှင်းပြတာ ပါ။ ဒါမှ
နောက်ပိုင်း Troubleshooting ကို ရမှာပေါ့။
ဒီတော့ USB Cable မှာ ဘယ်ကြိုးက ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ သိမှရမှာပေါ့။
USB cable ကိုခွာလိုက်ရင် ကြိုးမျှင်4ချောင်းတွေ့ရမယ်။ သုံးထားတဲ့အရောင်တွေက
များသောအားဖြင့်က - pin 1 အတွက် အနက်
pin2အတွက် ပြာနု/စိမ်းနု/အ၀ါ
pin3အတွက် ပြာရင့်/စိမ်းရင့်/အဖြူ
pin4အတွက် အနီ/ခရမ်း
တိုင်းပုံတိုင်းနည်းက ဒီလိုဗျ (DV Volt /Multi Meter မီတာတော့ရှာထား
Computer ကို ဖွင့် အဲဒီ့ USB Cable (ဖြတ်ထားပြီး) ကိုတပ်ပါ။
USB ကြိုးမျှင်4ချောင်းမှာ အနက် (သို့) အဖြူ ကြိုးပါလားရှာ အဲနှစ်ခုထဲက
နှစ်ခုလုံးပါခဲ့ရင်လည်း မပူပါနဲ့။ အနက်ကသာ GND (- 0V) ပါ။
အဲဒီ့ GND ကို Meter Tester အနက်နဲ့ထောက် (Meter Switch ကိုတော့ DC 10 V
မှာထား) ကျန်ကြိူးတွေကို meter ထောက်တံ အနီနဲ့တစ်ချောင်းခြင်းလိုက်ထောက်။
Data တွေနေရာမှာ Meter Pointer ကလှုပ်နေမယ်။ +5 V ကိုထောက်မိရင်
ငြိမ်သွားမယ်။5V ပြနေမယ်။
5 V ပြတဲ့ ကြိုးအရောင်ကိုမှတ်။ UTP cable နဲ့ဆက်။ ဆက်တဲ့အခါလည်း
မှတ်ထားနော်။ တဖက်မှာ နောက် USB တစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်တဲ့အခါ ခုနက မှတ်ထားတဲ့
0V နဲ့ +5V ကြိုးတွေကို 5V adapter ရဲ့ကြိုးကိုပါ ရောချိတ်ပေး။ + / -
တော့မမှားစေနဲ့နော်။ ဒါဆိုရင် USB Adapter လေးတပ် Found New Hardware
ပျောက်သွားဘီ။ ဟူး ........
အဆင်မပြေတာရှိရင်။ မရှင်းတာရှိရင် မေးပါ။ အားမနာပါနဲ့။ မလုပ်တတ်ရင်
TV/VCD ပြင်တဲ့လူတွေကို ဒီထဲကအတိုင်းမေးကြည့်ရင်ရပါတယ်။
ကဲရလောက်ပြီလားလို့ဘဲ။ မရရင် ကျနော့ဆီကို Feedback လေးတွေပို့ပေးကြပါ။ သေသေချာချာ ရှင်းပေးပါ့မယ်။
နောက်ထပ်၀င်တဲ့ Feedback လေးတွေပါ။
4th FeedBack or Thanks
ဟုတ်ကဲ့အကိုရေ... အခုလိုသေချာရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဒါတွေလုပ်လိုက်ဆိုရင်လည်းရပေမယ့် အခုလို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့
အဲဒီအတွက် တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အသိပညာတိုးတာပေါ့။
အကိုပြောသလို ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
အကိုရေ... သေချာတွေးကြည့်တော့ မရှင်းတာလေးရှိလို့ သေချာအောင် မေးပါ့မယ်။
(1) Computer ဘက်က 0V နဲ့ 5V နှစ်ချောင်းပူးပြီး adapter ဘက်က 5V
adapter ဘက်က 0V ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထား... အဲဒီလိုလားမသိဘူး။
+/- မမှားစေနဲ့ဆိုတာက adapter ဘက်က 5V နဲ့ 0V မှားဆက်မိမှာကိုပြောတာလား။
(2) ကျွန်တော့ UTP က မီတာ ၃၀ နဲ့ဆက်ထားတာဗျ။ ကျွန်တော့ အိမ်က
ဘေးပတ်၀န်းကျင်ကအိမ်တွေထက် တော်တော်လေးမြေနိမ့်နေလို့ GSM တောင် သိပ်မမိဘူး။
တော်ကြာ မမိရင် ခေါင်မိုးနားအထိတက်ရင်တက်ရအောင် ပို၀ယ်ထားလိုက်တာ။ အဲဒါ
အရှည်နည်းနည်း ဖြတ်ပစ်ဖို့လိုမလားမသိဘူး။ အကိုက မီတာ ၂၀ ပဲပြောထားလို့။
ဟုတ်ကဲ့ ပိုရှင်းအောင် ပုံလေးပါပို့လိုက်ပါတယ်။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်လဲ လိုချင်ပါတယ်ဗျာ....ကျွန်တော်လဲ နည်းပညာ တစ်ခုအနေနဲ ့လေ့လာချင်လို ့ပါ...
မေးလ်က bulejiby[at]gmail.com ပါ.. ကျေးဇူးပါဗျာ...:)
aquarius wrote: »
ဘာတွေတောင်းကြတာလဲဟင်! တိတိကျကျလေးပြောပါလားခင်ဗျာ။ ဘာပေးရမှာဘာလိမ့်နော်။ :105:
sorry အစ်ကို လောသွားတယ်
GSM Clone ....အကြောင်းလေးကိုသိချင်တာပါ...:77:
GSM Clone ကို အစအဆုံး update လုပ်ပါ့မယ်။ :65::65:
အစ်ကိုကျွန်တော်ကိုလဲ usb ပြင််နည်လေ mail နဲsend ပေနော်:D
Me2,I want .
I g mail [email protected]
i also link here,
Micro XP တဲ့ test it.
ကျနောက မင်:မင်း ဝင်းထဲမှာဗျ...
ဟုတ်ကဲ့ သရဖူ ကြီ: ဆောင်းပြီး ဘီယာသောက်နေ တဲ့သူတွေ.ရင်နှုတ်ဆက်ပါ့မယ်..:D:D:D:D
USB ဆိုတာ USB flash drive တွေကိုပြောတာလားဟင်။ သား8GB stickပျက်သွားလို ့ပြင်နည်းသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် usb detect တော့သိပါတယ်။ file copy လုပ်။ stick ကိုဖြုတ်။ stick ကိုပြန်တပ်ကြည့်ရင် file တွေက error တွေတက်နေပါတယ်။ virus ကြောင့်မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာပြောပြစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဆီလည်းပို့လိုက်ပါအုံးအကို [email protected]
ကျနော် Create လုပ်ထားတဲ့ Portable Freedom လေးပါ။
portable Game လေးတွေကိုစိတ်၀င်စားရင်
[COLOR=#ff6600][B]Pass UNclockww.vietproblog.com[/B][/COLOR][/INDENT][COLOR=#33cc00][B]From Easy-share:[/B][/COLOR][INDENT]http://www.easy-share.com/1906841424/vietproblog.com_FantasticFour.part1.rar
java ရဲ့ jar ကနေ exe ပြောင်းချင်သူတွေအတွက်ပါ။
ဒီမှာယူလိုက်။ ifile က အဆင်မပြေဘူးလို့ကြားတယ်ဗျ။ မရရင်ပြန်ပြောကြပါနော။
IP address ကို Hide လုပ်တဲ့ Program လေးပေးပါဦး ကိုပရင့် ပြီးတော့ Firewall ကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲပြောပြပါဦး
ရော့ဗျား Hide.IP.Platinum_IP_faker_IP.Hider တဲ့ ။ Firewall ပိတ်တာကတော့ ၀င်းဒိုးရဲ့ ကွန်ထရိုးပန်နယ်ထဲကနေ ပိတ်တာပါ။ ၀င်းဒိုးသမားတိုင်းလုပ်နေကျ ဖြစ်ပါတယ်။
သူလဲ လွယ်တယ် ဟဲဟဲဟဲ:)):)):))[/QUOTE]
အစ်ကို ရေ... လုပ်ပါအုံး။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ စိတ်၀င်စားတယ်။
လုပ်ပါအုံး... အဲဒီနည်းရရင် ကျွန်တော် အတိုင်းထက်အလွန်:)):)):))
ရတော့၇တယ်ကိုပရင့် ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေကျရင် your IP 203. ....... is already downloading ဆိုပြီးပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်တာလဲ သူများဒေါင်းနေလို့လား ပြောပြဦးနော်
plsease email to [email protected] :):)
bal lo lote pi sint ya mar le` .., bar ne` sint ya mar le` pyaw pya oo lay.., lote par byar..,seint win sar dal internet lo chin nay lo par..,
freeaccess wrote: »
အယ် freeaccess ကအခုမှ member ၀င်စဆိုတော့ MZ ရဲ့ Rule ကို မသိသေးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း MZ က Admin တွေခံယူသထားသလိုပါဘဲ။ ညံတယ်လို့ဘဲပြောပြော တုံးလိုက်တာလို့ဘဲပြောပြော တောင်မရောက် မြောက်မရောက် language ကိုတော့ ကျနော် နားမလည်ဘူးဗျ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့ gtalk မှာ ပြောတဲ့ စကားအတိုင်းပြောရရင် မျိုးမစစ် language လို့ထင်တယ်လေ။ အဲလိုပြောလိုက်လို့ မင်းတစ်ခါမှ ဒီလိုမသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလို့မေး IT လောကရောက်ပြီး Internet သုံး၊ Gtalk သုံးတတ်ကတည်းက အခုထိ ဒီလို မရေးခဲ့ အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်က စာတွေကို စာလုံးပေါင်း ဖတ်၊ အသံကိုစိတ်ထဲရွတ်ရမှာ ပျင်းသလို၊ အသံထွက်လည်းညံတယ်လေ။ ဒီတော့ ကျနော် အသံထွက်လိုက်ရင် တလွဲခြည်းဘဲ ။ နောက်တစ်ခုက English အစစ်မဟုတ်တော့ speeking Program တွေနဲ့ ထွက်ကြည့်လည်း ဆင်တူတာ နည်းနည်းဘဲရှိတယ်။ ဘယ် အဘိဓါန်မှာမှလည်း ရှာလို့မရဆိုတော့ တော်တော်လေးအခက်ကြုံရပါတယ်။ ဒါေုကာင့် Freeaccess လည်း ဖြစ်နိူင်မယ်ဆိုရင် ပြောချင်တာကို English လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Myanmar လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ပီပီသသလေးပြန် ရေးပေးပါလားဗျာ။ အဲလိုပီပီသသလေးဆိုရင် ဘာသာမပြန်တတ်တောင် dictonary လေးပြန်လှန်လို့ရတာပေါ့။
နောင်တစ်ခု ကြိုပြောချင်တာက အခုလိုပြောတာ ေ၀ဖန်တာ၊ တိုက်ခိုက်တာ ရှုံချတာ၊ အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပီပီသသ မြန်မာလိုလေးတွေ ရေးကြရင် ပီပီသသ english လိုလေးတွေ ရေးကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဗျာ ဆိုပီးခံစားမှုလေးကြောင့်ပါ။
အကိုဗမာလိုမရိုက်တက်ရင်လည်း burglish ရှိတာပဲဗျာ ဒီလိုကြီးတော့ :68::68::68:
လုပ်ပါအုံး... အဲဒီနည်းရရင် ကျွန်တော် အတိုင်းထက်အလွန်:)):)):))[/quote]
ကိုပရင့် မျက်မှန်လုပ်ပီးပီလား :5: တောင်းဆိုနေကြပီနော် ... လုပ်အုန်း .. အနော်တို့လဲ ..လည်ပင်းရှည်လှပီ .. :d:d:d
ကျနော် ၀ုိင်ဖိုင်တွေနဲ ့အင်တာနက် ချိတ်ဆက် သုံးနိုင်ပုံတွေ ကိုတော်တော် လေး သဘော ကျ တယ် ဗျာ..ပြီးတော့အလကားသုံးရ မယ်ဆိုရင် ပို ပြီး စိတ် ၀င်စားတယ်...အဲတော့ကျနော် ၀ိုင်ဖိုင် နဲ့ ပါတ် သက် တာတွေ ကို ရှာဖွေကြည့် တဲ့ အခါ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ ့လိုင်းဆွဲအားကောင်းအောင် လုပ်ကြတာတွေ ကို တွေ ့ရတဲ့ အတွက် ကျနော် တို ့တွေ မျှေ၀ သုံးဆွဲ နိုင် အောင် တင် ပြ လိုက် တာ ပါ ...နောက် ထပ် နည်းလေးတွေ ရှိရင် လဲ တင် ပြ ပေးကြပါလို့တင် ပြရင်း အောက်ကလင် ့မှ ပါတဲ့ Video ဖိုင်လေးမှာဒေါင်းလော့ဆွဲ ကြည့်ကြပါ.....( ဒီမှာဒေါင်းပါ ):40:
Very very thank u bro!:41:
ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲ ဦးဦးပရင့်ရယ် ၊ မြန်မြန်လေးတင်နော် ..... ချိတ်၀င်စားတယ် :d
yylay wrote: »
ဘယ်ဟာကိုပြောတာလည်းဗျ။ အင်တာနက်ကိုပြောတာလား။ ကျနော် အားတဲ့တစ်နေ့ ဆာဗေးလာလုပ်ပေးမယ်လေ။ ကော်ဖီတော့တိုက်ပေါ့နော။ နောက်တာနော်။ ကော်ဖီမသောက်ဘူုး ညနေဆို......:d
ကျွန်တော်.ကို internet freeသုံးလို.ရအောင်လုပ်တဲ.နည်းလေးအစအဆုံးဘယ်လိုလုပ်လဲဆို
တာကိုကျွန်တော်. [email protected]ကိုပို.ပေးလို.ရမလား....အစ်ကိုအစဉ်ပြေမှပို.ပေးပါ ။ wifi connection ကိုပဲ free သုံးလို.ရမှာလား။ adsl ဆိုရင်ကောမရဘူးလား။ကျွန်တော်တို.အိမ်နားက cyber က သူတို.အိမ်ရှေ.ကို wireless နဲ.ပေးထားတယ်..အဲ.ဒါကို အစ်ကိုပြောတဲ.နည်းနဲ.သုံးလို.ရနိူင်မလားဆိုတာပြောပြပေးပါနော်၊
တိုတိုပရင့်..တားတား လည်: wifi ကို free kick ကစ်ချင်တယ်....
အရင်က web key viewer နဲ့ ကြည့်တာ Password မြင်ရတယ်....
ဒါပေမဲ့ အခု unsecured network ဖြစ်သွားပီ...ဘာ ပတ်စဝက် မှ မမြင်ရတော့ဘူး...
5 movie Hack ဘယ်လို ရနိုင်မလဲဆိုတာ မပြောသေးဘူးနော်.........တိချင်လို့
ကျနော် အိမ်မှာဗျာ..၀ိုင်ဖိုင်သုံးလိုင်းမိတယ် တလိုင်းကဖရီးဗျာ..သူငယ်ချင်းလက်တော့နဲံ စမ်းတော ့မိနေတာ နဲ ့အားရ၀မ်းသာ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမှာ အဒတ်တာလေး တခု ပြော၀ယ် လိုက် ..အိမ်ရောက်တာနဲ ့တခါထဲ ဒရိုက်ဘာ တင် ပြီး သုံးတာ ကောင်းသလားမမေးနဲ့ဗျို ့..အဲဒီရက်ကတော့သာယာနေတာ ပေါ့ဗျာ..နောက် လေးရက်တော့နေတော့...လိုင်းမိနေပေမယ် ့..ချိတ်လို့မရတော့ဘူး..တပါတ် လောက် နည်းအမျိုးမျိုးနဲံကြိုါ်စားတာလဲ မရ ဘူး ..ဒါနဲ့၀ယ်ခဲံတဲ့ဆိုင် မှာသွားပြန် စမ်းတော ့ကောင်းနေတယ်ဗျ..အိမ်ပြန် စမ်းကြည့်ပြန် တော့မရတော့ ဘူးဖြစ်နေတယ်..ကျနော်လဲစိတ်မရှည် တာ နဲ့အဒက်တာ နောက် တခု ထပ် ၀ယ်လိုက် တယ် ဗျာ..အိမ်ရောက်တော့ စမ်းကြည့်တာ အိုကေနေတာ ပဲ..နောက်သုံးရက်လောနေတော့မရတော့ ပြန် ဘူးဗျာ...နည်းပေါင်းစုံနဲ့ချိတ်နေတာ လဲ မရ ဘူး......အခုတော့အဒတ်တာ ၂ ခုနဲ ့ကျနော် စိုးကြီး တိုင် ပါတ် နေပြီ..ကူညီကြပါဦး ..ကိုပရစ်တို့ရဲ ့..အဟင် ့...သူတို ့လေ...စ..တုန်း က စကြပြီးတော့ခုတော့ စိုးကြီးမှာ.....အ၀ှာကြီး၂ ခုနဲ့ညညဆို အိပ်မပျော်ဘူး..တိရား...:((
ကျွန်တော်ထင်တာလေးပြောကြည့်မယ် . . .
အရင်ကျွန်တော့ဆိုင်မှာလည်း ဆိုင်စဖွင့်စတုန်းကပေါ့ . .wifi ကို free ပေးထားတာ . . ဆိုင်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကို laptop ယူလာရင် free ပေးသုံးတယ်ပေါ့ဗျာ . . . ကျွန်တော့ကိုတော့အသိပေးပေါ့ . . တစ်နေ့ ညဘက် စစ်ကြည့်လိုက်တော့ စက်တစ်လုံး ချိတ်နေတာကိုတွေ့တယ်. . .အသိလည်းမပေးထားတဲ့ Unknow စက်ပေါ့ . . .အဲ့ဒါနဲ့ အဲဒီစက်ရဲ့ MAC ကို ပိတ်ထားလိုက်တယ်. . . .MAC Address ဆိုတာက နက်၀က်ကဒ်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေါ့ . . .ပုံမှန်ဆို ကဒ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Address မတူဘူးလေ. . .
အဲ့ဒီလိုလေး ပိတ်ထားလိုက်တော့ . .တခြားကဒ်နဲ့ဆိုရင်တော့ သုံးလို့ရတယ် . ..
ကိုစိုးကြီး ဖြစ်နေတာ အဲ့ဂလိုများလား မသိဘူး . . .
အဲ့ဂလိုဆိုရင်လည်း မပူပါနဲ့ . . .MAC Address ချိန်းလို့ရတဲ့ ဆော့၀ဲလ်ရှိတယ် . .:67: ကျွန်တော့ဆီမှာတော့မဟုတ်ဘူး ဟိုးအရင်ကတော့ . .တစ်ခါ ဒေါင်းထားဖူးတယ် . .ရှာလို့တွေ့ရင် ပေးမယ်နော် . .. :103:
ကျနော်လဲရှာမယ်ဗျာ.. ကျနော် ကိုလဲ အမြန်ဆုံး ရှာလို ့ရ ရင် ဒီဖိုရမ်မှာပဲ တင် ပေးပါလို ့...ကျေးဇူးဗျာ
ကျနော် ဖိုရမ်မှာ တက်တက်ပြီးရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ ဂျီကျကျနေတာ ..တော်တော်များများထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်..( ကိုပရစ်ပါတယ်လို့မပြောဘူးနော် ) ဒီညမှာတော့ကျနော် ညတိုင်းခေါင်းစားခဲ့ တဲ့အဖြေ ကိုရခဲ့ပြီး ..အောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲံပြန်ပါပြီ..နောက်တခါထပ်ပြီး ကျနော်ကို ဘလောက် လုပ်မယ်ဆိုလဲ ကျနော်မကြောက်တော့ဘူး...အဖြစ်ကဒီလိုဗျ..ကျနော် အဒါတ်တာ တခု၀ယ်လိုက် သုံးရက်လောက်ပဲသုံးရလိုက်ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး..ကျနော်ဒီ ပို့စ်ရဲအပေါ်မှာ ကျနော်အဖြစ်လေးကိုရေးလိုက်တော့မောင် က ကျနော်မသိသေးတာလေးတခုကိုပြောပြတယ်ဖတ်ကြည့်ပါ..သူပြောမှ ကျနော်စဉ်းစားမိပြီး GOOGLE မှာ MAC change တဲ့ဆော့၀ဲလေးကိုရှာပြီးအိမ်မှာပြန်စမ်းကြည်လိုက်တော့ဆော့၀ဲတော်တော်များများနဲ့ အဆင် မပြေဘူး ခုကျနော်ပေးလိုက်တဲ့ဆော ့၀ဲလေးနဲ့မှာနောက်ဆုံးအဆင်ပြေသွားတယ်..ဗျာ လိုချင်ရင်တော့ဒီမှာဒေါင်းပါ..Full ပါ...ပြသနာအရင်ခံကတော့ကျနော်ရဲ ့အဒါတ်တာတွေရဲ့ MAC ADD ကိုသူက ဘလော ့လုပ်ပြစ်လိုက်တာပါပဲ..ဒီေတော့၀ဲလေးရှိပြီဆိုတော့သူဘယ်လောက် ဘလော့လုပ်ုလပ်ကျနော် MAC ချိန်းပြီးပြန် ၀င်နိုင်ပြီပေါ့ဗျာ.....
ကျနော်ရစ်ခဲ့မျှ နားလည်ပေးခဲ့သူအားလုံးအား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်..........စိုးကြီး
ကိုစိုးကြီး အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် . . .ကိုစိုးကြီး ပေးထားတဲ့ ဆော့၀ဲလ်ကိုလည်း ဒေါင်းထားလိုက်အုန်းမယ် . . .လိုအပ်ရင် အဆင်သင့်ရှိအောင်လို့ . . .
ကျွန်တောလည်း စိတ်၀င်စားတယ် . .
it has been already discussed ..pls find older posts.
ခိုးတယ်ဆိုတာလူတွေ ခံလို ့မရ ဘူးလေ...တွေ ့သွားရင် တော့ဘယ် သူ က လက် ခံမှာလဲ အဲဒီတော့ကျနော့် လို မဖြစ်အောင် ကို ရဲ့MAC ADD ကိုသူများမမြင်အောင်ပုန်း တဲ့ ဆော့၀ဲလေးလဲ ဒီမှာ ဒေါင်းသွားကြဦးနော်....
အစ်ကို ပရစ်ကြီး ရေ ကျွန်တော်က wireless keyview ကို ဘယ်လို သုံးရမှာ လဲ ဟင်...
ကျွန်တော် internet ဆိုင်မှ သုံးကြည့်တာ ဘာမှ မပေါ်ဘူး ကိုပရစ်ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ကြည့်တာအဆင်မပြေလို့ပါ နည်းနည်းကူညီကြပါအုံး:103::103::103:
<marquee>ကူညီ ကြပါအုံးနော် သားသား ကို ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျာ </marquee>
ကျနော် ၂ ပေ စလောင်းကို ထိပ်ဖူး ဖြုတ်ပြီး usb wireless network တပ်ပြီး စမ်းတာ အေ၀းကြီး မရလို့ ဘာများ မှားနေလဲလို့ သိချင်တယ် စလောင်းပန်း နဲ့ မရတာလား ခေါက်ဆွဲ လုပ်တဲ့ စကာ နဲ့ မှ ရမှာလား ??????
ဟိုက mac ကို block နည်းမသုံးပဲ accept နည်းသုံးရင်သေပြီနော်။:D
2 ပေစလောင်းရဲ့ LNB ထိပ်ဖူးတပ်တဲ့နေရာ 8 ပေစလောင်း LNB ထိပ်ဖူးတပ် တဲ ့နေရ မတူဘူးဗျ ။ 8 ပေမှာအလယ်တဲ့တဲ့ ကျတယ် ။2ပေမှာက ဘေးနားနဲနဲရောက်နေတယ်.။ သေချာပြန် ကြည့်ကွာတယ်ဗျ ။ အဲဒီ ၂မျိူးမှာ focus ချိန်ယူရတဲ့နေရာကွာနေတယ် ။ 8 ပေ စလောင်းပုံစံမျိုး စလောင်းဗန်း အ၀ိုင်း နဲ့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ data reflection က အလယ်တည့်တည့် ကနေပဲ direction ကိုချိန်ဆ နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ။2ပေမှာဆိုရင်တော့အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအချက်လေးနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ပြီး နောက်တကြိမ်လောက် ပြန်လည်စမ်းသပ်ကြည့် နိုင်ပါတယ် ။ .......................:39:
ဘာမဆိုု ကုန်ကြဖို့က အရင်လာရတာဘဲနော် အေးလေ နက် အဆင်မပြေသူတွေကတော့ စိတ်၀င်စားနေတာဘံဗျာ နောက်ထပ် ဒီ ဖရီး အကြောင်းလေးတွေ များများ ဆက်ပြောပါလို့ မူးမူး ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
WiFi Hack နည်းလေးတော့သိရပါပြီခင်ဗျာ။WiMax Hack နည်းလေးကောသိရဘူးလားအကို၊ စိတ်ဆိုးရဘူးနော်
give me !pls